DOWNLOAD HMS zvisingaverengwi FSX & P3D & FS2004 - Rikoooo
HMS zvisingaverengwi FSX & P3D & FS2004 mhando 1.1
Downloads 6 135
Munyori: Milton Shupe, Nigel Richards, Rob Barendregt, Sasha Rieger, uye Rob Ibey
Download Kune FSX & Steam Edition & P3D v1. * v2 v3 v4 kuongororwa & FS2004
HMS zvisingaverengwi 18th Century akareba Ship yaiungana rigger zvachose mhepo vadzingirwa, mumwe nomumwe wakagara uye kudzorwa maseiri vakagarwa mireza nenhungamiro uye mhepo aimhanya, wakagara pachivhiri, uye nechikepe Management Window kudzora zvose chikepe fuctions. Ship anopindura mhepo aimhanya uye kutungamirirwa naye Yaw, Keeling, uye kukwirira kwenzwi zvichienderana maseiri kutumirwa uye muchivanze ruoko nzvimbo. Ambient ruzha, mhepo shanduka uye chamupupuri dutu ichirira, chikepe kuti bhero, "Mureza", chinobata nokuyera / inodonha zvose kupamhidzira kunyudza.
Rine uyewo FS2004 enderana shanduro
Verenga zvinyorwa kuti chinobatanidzwa kana usingadi chikepe chako kuramba nechando.
BIG CHERECHEDZA: The ichangoburwa shanduro FSUIPC zvinodiwa HMS zvisingaverengwi kushanda.
Note: Realism Kurongwa chinofanira kuti "Nesimba" yepamwoyo Wind Migumisiro (Ko kushanda "Easy" realism muna FSX.)
HMS mapikira, aizivikanwawo HM Armed Mudziyo mapikira, kaiva ngarava yakatengwa neDare Royal Navy kuti botanical basa. Ngarava, pasi murayiro William Bligh, akatumirwa Pacific Ocean kuwana breadfruit zvinomera uye kumuendesa navo British nezvinhu zviri West Indies. Kuti basa haana kunyorwa, nokuda mumwe mutiny inotungamirwa Kuita refutenendi Fletcher Christian. Iri raiva rakakurumbira Mutiny pamusoro zvisingaverengwi.
HMS zvisingaverengwi FSX & P3D & FS2004 mhando 1.1 Download
Downloads: 139 317
Downloads: 35 205